Egypta: Voasivana ny kaonty Flickr an’ilay mpikatroka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jolay 2018 3:12 GMT
Nitroatra ireo mpikatroka Egyptiana taorian'ny “nanivanan'ny” Flickr ny kaonty fizaran-dry zareo sary.
Nanoratra ilay mpanao gazety, bilaogera sady mpikatroka Hossam El Hamalawy hoe :
“Nahatsikaritra aho fa ny sasany tamin'ireo saripikako farany avy any Irlandy, izay nahitana an'i Palestina sy ny sary hosodoko an-drindrina Repoblikana dia tsy hitan'ny besinimaro raha tsy miditra amin'ny kaontiny mihitsy izy ireo. Nandefa mailaka tany amin'ny andriamanitry ny Flickr aho. Tsara fanahy izy ireo tamin'ny famaliana izany haingana ary nanisy fanamarihana ny sasany tamin'ireo sary , ka nametraka azy ireo tamin'ny toetra “safe” (voaaro), saingy tsy nanome ahy fanazavana ny antony nanomezana izany fanamarihana izany.
Ny hany antony azoko eritreretina dia ny fitongilanana ara-kevitra anti-Palestiniana “
Mbola niandry ny valiny mahafa-po izy taorian'ny fifanakalozana mailaka roa tamin'ny Flickr:
“Mbola tsy nahazo valiny avy amin'izy ireo aho momba ny antony nanasivanana ny sariko tany Irlandy teo amin'ny pejy voalohany, na ny antony nanovana izany.
Lazaiko fa kiriko aho ary mila ny firaisankinanareo aho mba hamerina ny kaontiko flickr ho toetra “safe” indray, mba hahafahan'ireo milina fikarohana mahita izany “
Nandrahona i Hamalawy fa hifindra any amin'ny tolotra hafa izy satria tsy hanaisotra fotsiny tsotra izao ny sarin'ny fitokonana sy ny fihetsiketsehana izay, izay avy amin'ny mpakasary hafa nandray anjara tao amin'ny kaontiny ny sary sasany.
Nanohana an'i Hamalawy i Nora Younes ary nandrahona ny hifindra ihany koa.
“Raha toa ka tsy voavaha haingana ny raharaha flickr laharana faha 982056 dia -ny tenako- mpisera FlickrPro nandritra ny 3 taona, mpaka sary fanao an-gazety, ary mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona fanta-daza manerantany dia hifindra ihany koa. “
Naneho ny tsy fankasitrahany ny fanivànana ny kaontin'i Hamalawy i Nora izay nahazo ny loka HRF :
“Miady eo amin'ny sehatr'ady maro ny fahalalahana miteny ankehitriny: nampiato ny tolotra nataony tany Egypta ny Twitter. Tamin'ny taona 2007, naaton'ny Youtube ny fantson'i Wael Abbas raha vao nofafana vao haingana ny pejiny facebook. Ary ankehitriny, nanivana an'i Hossam el-Hamalawy ny flickr. Tokony tsy hiankin-doha amin'ireo orinasa ireo isika fa mila mampivelatra ny Tambajotra Sosialy Arabo manokana “
Any amin'ny fivoarana hafa, nitatitra momba ny fanivanana ny kaonty Flickr an'ilay mpikatroka Wael Abbas ihany koa i Hamalawy.
Oadray … Nesorin'izy ireo aloha ny fantsony YouTube, ary nofafan'ny Facebook indray ny kaontin'i Wael ankehitriny .